Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ethiopian Airlines sy DHL Global Forwarding dia manambara orinasa iaraha-miasa
Ny DHL Global Forwarding sy ny Ethiopian Airlines, vondrona fiaramanidina lehibe indrindra eto Afrika, dia nanao sonia fifanarahana vaovao hananganana orinasa iaraha-miasa.
DHL Global Forwarding, mpamatsy asa serivisy ho an'ny rivotra, ranomasina ary arabe, ary ny Ethiopian Airlines, vondrona fiaramanidina lehibe indrindra eto Afrika, dia nanao sonia fifanarahana vaovao hananganana orinasa iaraha-miasa - DHL-Ethiopian Airlines Logistics Services Ltd., hananganana ny orinasa JV mpamatsy lozisialy Cargo Logistics izay mitondra any Afrika; ny orinasa dia hiorina any Etiopia ary hanao orinasa any amin'ny kaontinanta afrikana manontolo, manatsara ny fotodrafitrasa sy ny fifandraisana eo amin'ny lafiny ara-pitaovan'i Etiopia.
Ny Ethiopian Airlines, izay mandray anjara betsaka amin'ity fiaraha-miombon'antoka ity, dia hanome fanampiana ara-dalàna sy ara-pitantanana satria ny DHL Global Forwarding dia mametraka fifandraisana an-habakabaka sy ranomasina ary fifamoivoizana eo amin'ireo ivom-pivarotana lehibe any Etiopia sy ny sisa amin'ny tany. Pramod Bagalwadi, veterana DHL manana traikefa efa an-taompolo mahery eo amin'ny sehatry ny fitantanana ao anatin'ny indostrian'ny lozisialy, dia notendrena hitarika ny fikambanana vaovao. Ity dia ho portfolio fanampiny ho an'i Pramod, izay mitarika ny ekipan'ny Tetikasan'ny Indostria ho an'ny DHL any Afrika Atsimon'i Sahara ary mpiara-miombon'antoka stratejika ho an'ny orinasa ao amin'ny faritra.
"Amin'ny fitomboan'ny harin-karena faobe, dia miditra amin'ny sain'ny maro i Africa amin'ny maha foibe famokarana azy. Ny hetsika farany hanokatra ny toekarena dia hitohy hampisondrotra ny toerana misy an'i Etiopia ho toekarena mitombo haingana indrindra atsy Afrika, ary eo ambany fitarihan'ny Pramod, ny orinasa dia afaka manome fotodrafitrasa lozisialy azo refesina sy mateza hiatrehana soa aman-tsara ny filana lehibe amin'ny indostria ifotony. ”, Hoy i Amadou Diallo, CEO, DHL Global Forwarding Middle East and Africa,
“Ny lozisialy dia lakile hanohanana ny fitomboana ara-toekarena haingana sy ny fivezivezen'ny indostrialy. Noho izany, ny Etiopiana dia niara-niasa tamin'ny DHL izay manana fahaizana efa za-draharaha sy traikefa amin'ny sehatry ny lozisialy, miaraka amin'ny tanjona hanararaotra ny vahaolana logistika sahaza amin'ny resaka vola, ny fotoana ary ny kalitao. Efa nisy fiaraha-miasa efa ela sy nifanomezana samy hafa miaraka amin'ny DHL, ary miaraka amin'ity JV ity dia kendrentsika ny hahatonga ny firenena ho ivon-toeran'ny logistics ho an'i Afrika, "hoy i Tewolde GebreMariam, CEO, Ethiopian Airlines Group.
Joint Venture noforonin'ireo mpiara-miasa maharitra mba hampiakatra ny fitomboany
Ny fiaraha-miombon'antoka dia dingana iray hafa amin'ny fiaraha-miasa maharitra eo amin'ny DHL Global Forwarding sy ny Ethiopian Airlines. Nanomboka ny taona 2010, ny DHL Global Forwarding dia nanohana ny fikojakojana, fanamboarana ary fanarenana (MRO) an'ny sehatry ny varotra Ethiopian Airlines, manitatra vahaolana isan-karazany amin'ny Serivisy Logistika farany ho an'ny faritra fiaramanidina, motera ary modely mekanika ho an'ny lamba, fitaovana , sakafo sy zava-pisotro - amin'ny alàlan'ny entam-barotra amin'ny rivotra sy ranomasina eo anelanelan'ny Eoropa sy Azia.
Ny fiaraha-miombon'antoka dia hanome ny fahaiza-manaon'ny mpitatitra entana sy fotodrafitrasa ilaina ho an'i Afrika, izay nitomboan'ny fitomboan'ny harinkarena izay nitaky fitakiana serivisy fandrindrana sy fikirakirana iraisam-pirenena.